Noti: Ataovy amin'ny fampatsiahivana, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Isaky ny manomboka ny taona isika dia manandrana manao fampanantenana marobe, iray na tsia izay matetika nohazonintsika, na satria manadino isika na tsy miraharaha fotsiny. Mba tsy hanadinoana ny sasany amin'ireo fampanantenana ireo dia afaka mampiasa fampiharana izay mampatsiahy antsika isan'andro ny fanoloran-tena nataontsika. Ao amin'ny App Store dia misy fampiharana marobe azo alaina amin'ity, misy ny karama ary ny hafa misy fividianana fampiharana. Androany isika dia miresaka momba ny naoty: Ataovy amin'ny fampahatsiahivana fampiharana, iray amin'ireo rindranasa karama, izay ahafahantsika misintona maimaimpoana amin'ny alàlan'ny rohy avelako amin'ny faran'ny lahatsoratra mandritra ny fotoana voafetra.
Noti: Ataovy amin'ny fampatsiahivana, fampiharana tsotra be izay anananao io. vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 1,99 euro, fa araka ny efa nampahafantariko anao, amin'izao fotoana izao dia azo sintonina maimaim-poana. Ny fanamarihana dia ahafahantsika mamorona lisitry ny lahasa miandry fa tokony hatao, ireo asa izay noforoninay tamin'ny endrika lisitra ary afaka manafoana / miampita isika rehefa manatanteraka azy ireo. Ity fampiharana ity dia mety indrindra amin'ny tanjona nolazaiko teo am-piandohan'ny lahatsoratra, hanao lisitra fiantsenana, hanomanana izay rehetra tsy maintsy hataonay amin'ny dia iray….
Ity fampiharana ity dia miavaka amin'ny ankamaroan'ny ankamaroan'ny misy amin'ny App Store satria manolotra anay widget ho an'ny foiben'ny fampandrenesana ahafahantsika manampy, manova na mamita asa miandry, zavatra izay vitsy no manao. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny lahasa iOS, manana sary famantarana izay mampiseho amintsika ny isan'ny asa miandry, manome loko 6 hanamboarana ny rindranasa ary ampifanarahana amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny Dropbox (tsy misy iCloud amin'izao fotoana izao), izay mety ho olana ho an'ireo mpampiasa tsy manana kaonty amin'ity serivisy fitehirizana ity.
Noti: Ataovy amin'ny fampahatsiahivana€ 2,29
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Noti: Ataovy amin'ny fampahatsiahivana, maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Ity dia raha ny tatitra manokana momba ny doka "iray amin'ireo fangatahana karama, fa mandritra ny fotoana voafetra izay ahafahantsika misintona maimaimpoana" dia tsy misy afa-tsy famitahana miharihary, IZAY REHETRA natao dia ny mamorona lisitra IRAY ao amin'ny fampiharana fampahatsiahivan'ny IOS.
Apple dia manohy tsy manamboatra ny olan'ny bateria amin'ny boaty AirPods
Afaka nividy efitrano fandefasana sarimihetsika i Apple tamin'ny taona 2017